विश्वकप फुटबल खेलमैदान निर्माण कार्यमा कार्यरत श्रमिक फर्काउन कतारको हतार - हिमाली पत्रिका	विश्वकप फुटबल खेलमैदान निर्माण कार्यमा कार्यरत श्रमिक फर्काउन कतारको हतार - हिमाली पत्रिका
विश्वकप फुटबल खेलमैदान निर्माण कार्यमा कार्यरत श्रमिक फर्काउन कतारको हतार
हिमाली पत्रिका प्रकाशित मिती - २० मङ्सिर २०७८, सोमवार
काठमाडौँ । आगामी वर्ष हुने विश्वकप फुटबलमा दुनियाँलाई आमन्त्रण गरिरहेको कतारले रंगशालालगायतका पूर्वाधार बनाउने आप्रवासी श्रमिकलाई भने घर पठाउने नीति लिएको छ । समृद्ध देशका दर्शकका अगाडि विपन्न कामदार देखिएलान् भनेर उनीहरूलाई चारमहिने बिदामा पठाउन कतार सरकारले निर्णय गरेको हो ।
कतार सरकारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले विश्वकप सुरु हुनु दुई महिनाअघि नै ‘अत्यावश्यकबाहेकका’ श्रमिकलाई चारमहिने बिदामा पठाउन कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । श्रम मन्त्रालयले २१ सेप्टेम्बर २०२२ देखि १८ जनवरी २०२३ सम्म बिदामा पठाउन भनेको छ ।
‘विश्वकपको समयमा अत्यावश्यकबाहेकका श्रमिक कटौती गर्न श्रम मन्त्रालयको निर्देशन आएको छ,’ पब्लिक वर्कर्स अथोरोटीद्वारा रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई पठाइएको पत्र नम्बर २०२१/४२ मा भनिएको छ, ‘सबै रोजगारदाताले बढीभन्दा बढी श्रमिक कटौती गरी बिदामा पठाउन रणनीतिक योजना बनाएर पेस गर्नुहोला ।’ श्रमिकलाई घर फिर्ता पठाउँदा सडकलगायत परियोजनामा पर्न सक्ने असरलाई पनि ध्यानमा राख्न भनिएको छ ।
निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई बिदामा राख्ने तयारी भएकाले सबैभन्दा बढी प्रभावमा नेपाली नै पर्ने सम्भावना छ । श्रम मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कतारमा काम गर्ने नेपालीमध्ये निर्माण क्षेत्रमा १४.८ प्रतिशत, सवारी चालक र मेसिन अपरेटर ८.३ प्रतिशत, इलेक्ट्रिकल तथा मेकानिकल टेक्नेसियन ८ प्रतिशत, सामान्य सेवामा ५६.८ प्रतिशत, सेवाजन्य काममा ७.९ प्रतिशत र अन्यमा ५.२ आबद्ध छन् ।
होटल वा क्रुजमा बस्ने विदेशीका लागि शिविरमा बस्ने श्रमिक हटाउने योजना भने स्वाभाविक नदेखिने पूर्वराजदूत भारद्वाजको भनाइ छ । ‘श्रमजीवीहरूको पसिनाले रंगशाला निर्माण भइसके । रेल पनि गुड्यो । ठूला सडक पनि बनिसके । अब सहरको शृंगार जारी छ । यही कामका लागि लगिएका श्रमिकहरू ६ महिनाभित्रै फर्कनुपरेमा राम्रो सन्देश जाँदैन । जाँदा लागेको ऋण पनि उनीहरूले भुक्तानी गरिसकेका हुँदैनन्, चर्को मर्कामा पर्नेछन्,’ उनले भने ।
खाडी क्षेत्रमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको मामिलामा कार्यरत इक्विडियम अनुसन्धान केन्द्र, दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपाल विश्वकपको पूर्वाधार खडा गर्न दिनरात खटिएका श्रमिकहरूलाई नै प्रतियोगिताकै बेला घर फर्काउनु गलत भएको बताउँछन् । स्वैच्छिक रूपमा फर्कन चाहनेहरूलाई पनि प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘स्वदेश फिर्तीको विषय ऐच्छिक हुनुपर्छ, बाध्यकारी बनाइनु हुँदैन । विश्वकप सफल पार्न काम गरेका श्रमिकले टिकट काटेर खेल हेर्छु भन्छन् भने पाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बिदामा पठाउने हो भने चार महिनाको तलब के हुन्छ ? यात्राको प्रबन्ध के हुन्छ ? यी विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । एकै पटक बिदामा पठाउने नीति सानोतिनो तयारीले पुग्दैन ।’